Kodzero-dzevanhu, 12 Kubvumbi 2017
Chitatu 12 Kubvumbi 2017
Vaigara Mupurazi reManzou Voramba Vachishungurudzwa naAmai Mugabe
Sachigaro wekomisheni yeZimbabwe Human Rights Commission, VaElasto Mugwadi, vanoti chikwata chavakatumira kuManzou chiri kuita ongororo yekuona kuti kodzero dzevanhu ava dziri kutyorwa here kana kuti kwete.
Vamwe Vari Kunze kweNyika Vogadzirira Mhemberero dzeKuzvitonga
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kuronga kuungana munzvimbo dzakasiyanasiyana kutanga kupera kwesvondo rino zvichisangana nehama neshamwari zvichidya nekunwa pamwechete.
Amnesty International Yokurudzira Zimbabwe Kubvisa Mutongo weRufu
Mukuru we Amnesty International muZimbabwe, VaCousin Zilala, vati kunyange hazvo Zimbabwe isina munhu akaurayiwa gore rapera, pane vanhu vasere vakatongerwa rufu.
Masabata eChidzimai Osangana muMaryland
Mutungamiri wesangano iri, Amai Sasi Sibanda-Ncube, vanoti sangano ravo rakatanga makore gumi nematatu apfuura uye gore rega rega vanoita musangano uyu munzvimbo dzakasiyana siyana.
Zec Yotatsurana Zvakare neNera
Paitazve ropa rakaipa pakati pesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission nesangano rinomiririra mamwe mapato anopikisa reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA nezvemitemo yesarudzo.
Kutyisidzirwa kweVanhu Kunoonekwa seImwe Nzira Yakabatsira Zanu PF kuMwenezi East